Dowladda Somaliya oo ka digtay faragelin shisheeye ee dalka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowladda Somaliya oo ka digtay faragelin shisheeye ee dalka
Dowladda Somaliya oo ka digtay faragelin shisheeye ee dalka
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Mudane Cismaan Abokar Dubbe, ayaa ugu yeeray danjireyaasha ka hawlgala dalka ilaalinta madaxbannaanida iyo qarannimada shacabka iyo Dowladnimada Soomaaliyeed.
Wasiirka ayaa tilmaamay in qoraalo ay soo saareen danjireyaasha shisheeye qaarkood ay ka baxsan yihiin shuruucda iyo curfiga diblomaasiyadeed, isagoo xusay in dhaqanka noocaas ah aysan aqbalayn shacabka iyo Dowladda Somaliya.
“Dalalka caalamka waxaanu ka filaynaa inay ilaaliyaan madaxbannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka. Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya waa dal leh madaxbannaani buuxda, arrimaheeda guddahana waa lama taabtaan. Waxaa jira danjireyaal u soo dira dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed farriimo aan waafaqsanayn shuruucda caalammiga, kana soo horjeedda ixtiraamka madaxbannaanida dalalka, ku xadgudubka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya waa khad cas oo aan laga gudbi karin.” Ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Dhanka kale, Wasiir Dubbe ayaa ugu baaqay Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada ee aan ka soo qaybgelin shirka saddexdii cisho ee la soo dhaafay in ay ku soo biiraan, ayna qaataan doorka iyo masuuliyadda qaran ee ka saaran sii ambaqaadidda hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka.
Previous articleCabdirashiid Janan iyo sida loogu soo dhaweeyay Beled Xaawo (SAWIRRO)
Next articleCabdirashiid Janan oo ka hadlay xil ka qaadista lagu sameeyay